थप ४ संक्रमितको मृत्यु, आज मात्रै ९ जनाले गुमाए ज्यान | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more थप ४ संक्रमितको मृत्यु, आज मात्रै ९ जनाले गुमाए ज्यान
थप ४ संक्रमितको मृत्यु, आज मात्रै ९ जनाले गुमाए ज्यान
भदौ १३ गते, २०७७ - १४:५१
यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा शनिबार मात्रै ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
काठमाडौं । पाटन अस्पतालमा दुई जना कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा काठमाडौंकी ५१ र भक्तपुरकी ६२ वर्षीया दुई महिला रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले बताए ।
गत साउन ३० गते अस्पताल भर्ना भएकी काठमाडौंकी महिलाको शुक्रबार राति साढे ९ बजे आइसियूमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । उनमा उच्च रक्तचापको समस्या थियो ।
भदौं ८ गते भर्ना भएकी भक्तपुरकी महिलाको शनिबार बिहान ६ बजे मृत्यु भएको हो । अस्पतालका अनुसार उनमा कुनै समस्या थिएन ।
भरतपुर अस्पतालमा एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृतक गोरखाको गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवाका ३८ वर्षीय पुरुष हुन् ।
उनको शुक्रबार उपचारको क्रममा आईसीयुमा मृत्यु भएको हो । योसँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको छ । संक्रमित संख्या २०८७ छ ।
त्यस्तै, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सिरहाको भदैया–६ घर भएका ८४ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । मिर्गौला, खोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएका उनको शुक्रबार राति मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताए ।
आजै वीरगञ्जमा कोरोनाबाट थप ३ जना, कास्की र पाल्पामा एक/एक जनाको संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा शनिबार मात्रै ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
भदौ १३ गते, २०७७ - १४:५१ मा प्रकाशित